ဘိုလီဗတ် အရှုပ်တော်ပုံ | YoeYar CG Blog
6 thoughts on “ဘိုလီဗတ် အရှုပ်တော်ပုံ”
JohnMoeEain on March 22, 2010 at 9:58 pm said:
လုံခြုံရေးမမရဲ့ အရိပ်တောင် မမြင်ရဖူး….
သူ့ခမျာ “အဟင်းဟင်း မောင်လေးကလည်း ဘာတွေ လာပေါ နေတာလဲ” တဲ့ :P
ခု အတည်အတံ့ ပုံထုတ်လိုက်ပီလို့ :)
jar jar on March 22, 2010 at 10:18 pm said:
ဒီပုံလေးကလည်း သူ့အထာလေးနဲ့သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ … ဒါလေးကိုရော..360 မလုပ်တော့ဘူးလား :)
Lionslayer on March 22, 2010 at 10:39 pm said:
ဟေ့.. စာမမြင်ရဘူး ဖတ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး ဘာတွေ လျှောက်ရွှီးထားတာလဲ :P အဝင်ပေါက်ဘက်က ဘာမှမှကို မရှိတော့ ၃၆၀ ဒီဂရီ လုပ်လို့ ရဘူး..
ပါကြီး on March 23, 2010 at 8:43 am said:
ဒါဆို ..အဲဒီတုန်းက အဆွေတော် MTZO တစ်ယောက်ကောဗျ…
ဘာတွေလုပ်နေလို့ ဘိုလီဗတ်ကို မလာရတာလဲ…
MTZO on March 28, 2010 at 4:11 am said:
Eane Min on July 19, 2010 at 12:19 am said:
a ko gyiaphaw ma par pe`hotel thwar taw A kite mhar paw. nout ta kharaphaw lay bar lay saung thwar naw. :)